Qaxooti ahaan, waxaa Nederland lagaa siin karaa badbaado. Waxaad ubaahantahay inaad codsato magangalyo ujeedadan. Inta lagu guda jiro howsha magangalyada (ee Dutch: asielprocedure), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ayaa baari doonta iyadoo ka wakiil ah dawlada Nederland inaad buuxisay shuruudaha aqoonsiga qaxootinimo sida ku cad Heshiiska Qaxootiga iyo qodobka 3aad ee Heshiiska Yurub ee Xuquuqda Aadanaha.
VluchtelingenWerk hada waxay mashquul ku tahay xarumaha magangalyo doonka, markaa waxay qaadan kartaa waqti ka dheer sidii caadiga ahayd ka hor intaanan ku caawinin. Waxaan kaa codsaneynaa inaad fahanto arintaan.
Muxuu sameeyaa VluchtelingenWerk?
VluchtelingenWerk wuxuu aaminsan yahay in qof kasta oo magangalyo doon ah uu xaq u leeyahay hanaan magangelyo oo dhameystiran. Shaqaalaheennu waxay bixiyaan taageero inta lagu jiro tallaabooyinka kala duwan ee habraaca:
Waxaan bixinaa macluumaad ku saabsan nidaamka magangalyada si aan u hubino inaad fahantay sida ay u shaqeyso, ururada ay khuseeyaan iyo waxa lagaa filayo adiga.
Waxaan kuu sharxeynaa waraaqaha IND iyo qareenkaaga.
Waxaan kaa caawin karnaa xaqiijinta sheegashadaada magangalyo. Tusaale ahaan, waxaan kaa caawin karnaa in dukumentiyo khuseeya loo diro Nederland. Wixii macluumaad dheeraad ah, Fiiri this leaflet.
Adiga ama qareenkaaga waxaad weydiisan kartaa qof ka socda VluchtelingenWerk inuu ka soo qeyb galo dhageysigaada si uu kuu siiyo taageero una hubiyo inaad fursad u leedahay inaad sheekadaada u sheegto.
Waxaan kaa caawin karnaa inaad heshid aqoon ama qaraabo.
Maxaa VluchtelingenWerk aanu sameyn?
Kuma caawin karno waxyaabaha soo socda inta aad ku sugan tahay xarunta magangelyodoonka:
Kuma taageeri karno arrimaha aan la xiriirin nidaamka magangalyada, isu keenista qoyska ama kaalmada dib ugu noqoshada waddankaagii hooyo.
Sidan oo kale, badanaaba ma awoodno inaan gacan ka geysano codsiyada deggenaanshaha kale, sida inaan la joogno lammaane cusub Nederland.
Sidoo kale kuma caawinno ganaaxyada, furitaanka, cusboonaysiinta rukhsadaha degenaanshaha, ama DigiD ama codsiyada dheefaha carruurta.
Xaaladaha badankood, kulama safri karno si aan u aragno dhakhtar ama u booqanno safaarad.
Shaqaalaha VluchtelingenWerk ayaa kuu gudbin doona hay'ado kaa caawin kara arrimaha noocan oo kale ah, ama ku siin doona macluumaadka lagama maarmaanka u ah in aad adigu diyaarsato.
Animatie asielprocedure: Somalisch (2017)
Video of Animatie asielprocedure: Somalisch (2017)
Filimkan wuxuu sharaxayaa nidaamka magangalyada Nederland. Filimku waa mid duugoobay, qaybo ka mid ah nidaamka magangelyada ayaa is beddelay tan iyo markii la sameeyay. Weli waan ku tusinaynaa maxaa yeelay waxay kaa caawinaysaa inay fikrad kaa siiso habka magangalyada iyo hay'adaha aad la macaamilayso Waxay kaloo bixisaa talooyin ku saabsan waxaad sameyn karto si aad ugu diyaar garowdo nidaamka magangalyada.
Waxaa Nederland lagugu siin karaa ogolaanshiyaha joogitaanka magangalyada shuruudo gaar ah hadaad:
aad ka cabsaneysid dacwad oogis la xiriira isirkaaga, diintaada, dhalashadaada, qaddarintaada siyaasadeed ama inaad ka tirsan tahay koox bulsheed gaar ah;
ka baqayaan ciqaabta dilka, jirdilka ama dhaqan kale oo ka baxsan bani’aadanimada;
ka cabso inaad noqotid dhibane rabshad aan kala sooc lahayn sababo la xiriira dagaal ka socda wadankaaga hooyo;
waxaa ku habsaday dhacdooyinka waddankaagii hooyo.
Dacwadda Dublin, ogolaanshaha magangalyo ee wadan kale oo yurub ah iyo dalal nabdoon
Ma timid dal kale oo Yurub ah kahor intaadan Nederland imaan, mise waxaad fiise u haysataa dal kale oo Yurub ah? Markaa, macluumaadka ku saabsan nidaamka magangalyada Nederland adiga kuma khuseeyo.
Akhriso waraaqda "Waddankee ayaa mas'uul ka ah dalabkaaga magangalyo?". Dhammaan waraaqaha nidaamka magangelyada waxaa lagu heli karaa luqado kala duwan oo ku saabsan this page.
Haddii aad ka timid waddan ay dowladda Nederland u aqoonsatay ammaan ama aad sharci deggenaansho magangalyo ka haysato waddan kale oo Yurub ah, dalabkaaga waxaa looga baaraandegi doonaa habsocodsiinta magangelyo doonka. Akhriso waraaqda "Nidaamka magangelyada ee la dedejiyay". Dhammaan waraaqaha nidaamka magangelyada waxaa lagu heli karaa luqado kala duwan oo ku saabsan this page.
Liiska wadamada nabdoon waxaa laga heli karaa halkan. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/lijst-van-veilige-landen-van-herkomst)
Xagee ka codsaneysaa magangelyada?
Haddii aad Nederland ka soo gashay dhinaca dhulka oo aad rabto inaad codsato magangelyo, waa inaad tagtaa Ter Apel. La xiriir booliska meelkasta oo Nederland ah si aad u hesho tikit maalin ah oo aad ugu safarto Ter Apel adoo raacaya gaadiidka dadweynaha. Haddii aad timaado garoonka diyaaradaha Schiphol ama dekedda Nederlandka, waa inaad iska xaadirisaa Koninklijke Marechaussee. Waxay ku geynayaan xarun soo dhawayn oo xidhan (Justitieel Complex Schiphol).
Akhriso waraaqda "Nidaamkaaga magangalyo. Macluumaadka Nidaamka Xuduudaha ". Dhammaan waraaqaha nidaamka magangelyada waxaa lagu heli karaa luqado kala duwan oo ku saabsan this page.
Markaad timaado Nederland: wajiga codsiga
Wejiga dalabku wuxuu bilaabmayaa ka dib markaad codsato magangelyo. Marxaladda codsigu badanaa waxay qaadataa saddex maalmood, laakiin waxay qaadan kartaa waxoogaa waqti dheer mararka qaarkood, sida xilliyada mashquulka badan.
Inta lagu jiro marxaladda arjiga, waa inaad buuxisaa foomka dalabka. IND waxay isticmaashaa foomka si ay u ururiso macluumaad muhiim ah oo adiga kugu saabsan. Waxaa ku jira su'aalo ku saabsan halka aad ku nooshahay, qoyskaaga iyo safarkaaga, tusaale ahaan. Sidoo kale waa inaad si kooban u sharaxdo sababta aad u codsaneyso magangalyo. IND waxay u isticmaashaa macluumaadkan si ay u go'aamiso sida howshaada magangalyo u socoto.
Kadib markaad buuxiso foomka, macluumaadkaaga shaqsiyeed waa la diiwaangelin doonaa. Waa lagaa qaadi doonaa sawir iyo faro, dharkaaga iyo shandadahaagana waa la baari doonaa. Taleefankaaga ayaa sidoo kale la qaadi doonaa oo la baari doonaa. Waxaad dib u heli doontaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Ugu dambeyntiina, waxaad yeelan doontaa wareysigaagii ugu horreeyay ee aad la yeelato IND, oo loo yaqaanno wareysiga arjiga. Shaqaale IND ayaa ku weydiin doona su'aalo ku saabsan degitaankaaga, qoyskaaga, dukumiintiyada, iyo safarka aad Nederland ku joogto. Jawaabahaagu waa muhiim, markaa noqo mid dhammaystiran oo sax ah. Sidoo kale waa inaad si kooban u sharaxdo sababta aad Nederland magangalyo uga codsaneyso. IND ma weydiin karto faahfaahin ku saabsan tan marxaladan. Macluumaadka waxaa kaliya loo isticmaalaa in lagu qorsheeyo nidaamka saxda ah.
Turjumaan madaxbanaan ayaa kaqeybgalaya kullamada IND, VluchtelingenWerk iyo qareenkaaga. Haddii aad dhibaato kala kulanto fahamka turjubaanka ama aad u aragto inaysan ku fahmaynin ama aysan si sax ah u turjumayn sheekadaada, fadlan isla markiiba u sheeg inta lagu jiro wadahadalka.
Isu diyaari hawshaada magangalyo
Kadib marxaladda arjiga, muddada nasashada iyo u diyaargarowga ayaa bilaabmaya. Muddada nasashada iyo diyaarinta waxay socotaa illaa lix maalmood laakiin xaaladaha qaarkood way ka sii dheereyn kartaa. Waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan nidaamka socda xarunta soo-dhowaynta. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaad mari doontaa qiimeyn caafimaad. IND waxay isticmaashaa qiimeynta caafimaadka si ay u go'aamiso inaad si sax ah u sharixi karto naftaada inta lagu jiro wareysiyada. Ka dib qiimeynta caafimaadka, shaqaalaha VluchtelingenWerk ayaa kuu sheegi doona talaabooyinka ku lug leh nidaamkaaga magangalyo. Ugu dambeyntiina, waxaad la kulmi doontaa qareenkaaga. Haddii aad joogto AZC, kulanka ugu horreeya ee aad la yeelato qareenkaaga wuxuu ka dhacayaa xafiiskooda. Waxaa lagu siin doonaa tigidh aad ugu safarto qareenkaaga. Qareenkaaga ayaa kugu hagi doona nidaamka magangalyada wuxuuna kaa caawin doonaa inaad isu diyaariso wareysiga oo faahfaahsan. Waxaad sidoo kale ka wada hadli doontaa wareysiga arjiga iyo haddii aad leedahay wax hagaajin ah ama wixii kugu soo kordha Qareenkaaga dowlada ayaa u xilsaartay laakiin waa xisbi madax banaan. Shaqaalaha VluchtelingenWerk sidoo kale way madax banaan yihiin.
Kala hadal VluchtelingenWerk ama qareenkaaga dukumiintiyada aad ka codsan karto wadankaaga asalka ah si ay u taageeraan dalabkaaga magangalyo, aqoonsiga, dhalashada iyo wadada safarka.
Bilowga nidaamka magangalyada
Nidaamkaaga magangalyo wuxuu bilaaban doonaa ka dib nasashada iyo muddada diyaarinta. Lix ilaa sagaal maalmood gudahood, IND (hay'ad dawladeed) ayaa go'aamin doonta inaad buuxinayso shuruudaha ogolaanshaha magangelyo ama haddii waqti dheeraad ah loogu baahan yahay baadhitaankeeda. Tilmaamaha soosocda waa sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan nidaamka magangalyada.
Maalinta 1: wareysi faahfaahsan
Wareysiga labaad ee IND waxaa loogu yeeraa "wareysiga oo faahfaahsan". Kani waa kulan muhiim ah inta lagu gudajiro oo aad si faahfaahsan ugu sharixi karto sababta aad uga soo qaxday wadankaaga. Haddii aad leedahay nabarro ama cabashooyin jireed ama maskaxeed oo la xiriira sababta aad u soo carartay, waa muhiim inaad u sheegto shaqaalaha IND. Noqo mid daacad ah, si qoto dheer u cadee waxa kugu dhacay.
Waa muhiim inaad sheegto sheekada dhammaan xubnaha qoyskaaga, oo ay ku jiraan carruurta haddii ay leeyihiin sababahooda gaarka ah ee qaxitaanka. Akhriso qoraalka Carruurta lasocota ee samaysa dalab magangalyo iyaga oo u gaar ah wixii macluumaad dheeraad ah.
Maalinta 2: doodda wareysiga oo faahfaahsan
Qareenkaaga ayaa kaala hadli doona warbixinta wareysiga oo faahfaahsan. Haddii wax ka maqan yihiin warbixinta ama aan si sax ah loo qorin, qareenkaaga ayaa ku soo wargelin doona isbeddelada la doonayo warqad uu u dirayo IND.
Maalinta 3: go'aanka loogu talagalay
IND ayaa qiimeyn doonta inaad buuxinayso shuruudaha ogolaanshaha deganaanshaha magangalyada. Waxaa jira sadex shey oo macquul gal ah:
Waxaad helaysaa sharci degenaansho.
Waxaad warqad ka heleysaa IND oo sheegaysa inay u baahan tahay waqti dheeri ah oo baaritaanka ah. Codsigaaga waxaa hadda looga baaraandegi doonaa Nidaamka Magangelyo ee la Kordhiyay.
Waxaad warqad ka heleysaa IND oo sheegaysa inay rabto inay diido dalabkaaga magangalyo iyo sababahee jira.
Maalinta 4: jawaab
Waxaad kala hadleysaa qareenkaaga go'aanka la damacsan yahay. Si wada jir ah, waxaad u diyaarin kartaan warqad aad ku bixinaysaan doodo sababta aad ugu diidan tihiin go'aanka la doonayo. Warqadan waxaa lagu magacaabaa "jawaabtaada".
Maalinta 5 iyo 6: go'aanka
ND ayaa go'aan ka gaareysa dalabkaaga magangalyo. Waxaa jira sadex shey oo macquul gal ah:
IND waxay kuu aqoonsan tahay inaad tahay qaxooti. Waxaad heli doontaa sharci degenaansho shan sano. VluchtelingenWerk ayaa kaa caawin karta inaad xubnaha qoyskaaga keento Nederland. Ka aqri wax dheeri ah bogga ku saabsan mideynta qoyska: https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/gezinshereniging
IND waxay ubaahantahay waqti dheeraad ah baaritaanka. Codsigaaga waxaa hadda looga baaraandegi doonaa Nidaamka Magangelyo ee la Kordhiyay. Go'aan ayaa lagu gaarayaa lix bilood gudahood.
IND waxay go aansataa inaadan wali buuxin shuruudihii ogolaashaha joogitaanka magangalyada. Waxaad ka heli doontaa warqad ka socota IND oo sheegaysa sababta loo diiday dalabkaagii magangalyo iyo in aad ka baxdo Nederland. Qareenkaaga ayaa racfaan ka qaadan kara go'aanka IND ee maxkamada. Haddii maxkamaddu sidoo kale ku xukumayso adiga, waa inaad ka baxdaa Nederland. Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso bogga 'Ogolaansho joogitaan ma leh, hadda waa maxay?' https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/geen-verblijfsvergunning-wat-nu
Xaaladaha qaarkood, nidaamka magangalyadu wuxuu qaataa 9 maalmood halkii uu ka ahaan lahaa 6. Waqtiga dheeriga ah waxaa loogu tala galay codsiyada magangalyo adag ee ay IND aaminsantahay inay ubaahantahay waqti dheeri ah, iyo magangalyo doonka kuwaas oo ubaahan fiiro gaar ah sababo laxiriira dhibaatooyinka maskaxda ama jirka
Waxaad xaq u leedahay hoy iyo kharashyada nolosha inta lagu guda jiro howshaada magangelyo. Waxaad joogi doontaa a COA xarunta magangalyo doonka (AZC) ama xarunta Justitieel Complex Schiphol. Haddii aad hesho ogolaansho magangalyo, waxaad joogi kartaa xarunta soo dhowaynta ilaa guri lagaaga helo. Haddii dalabkaada magangalyo la diido, xuquuqdaada hoy ayaa ku eg. Waxay kuxirantahay sababta diidmada, waa inaad uga tagtaa hoyga maalmo yar gudahood.
Ku celi codsiga magangalyo
Haddii aad dhammeysay dhammaan waxyaabaha sharciga lagu xalliyo, waad soo gudbin kartaa codsi magangelyo oo soo noqnoqda. Codsiga magangalyada soo noqnoqda waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa HASA.
Go'aan wanaagsan oo ku saabsan dalabkaaga ku celcelinta ah wuxuu u baahan doonaa xaqiiqooyin cusub ama duruufo. Tan macnaheedu waa macluumaad cusub oo aadan soo bandhigin intii aad ku jirtay nidaamkaagii magangalyo ee hore, sida dhacdooyinka wax ka beddelay xaaladdaada ama xaaladda waddankaagii hooyo, ama isbeddellada siyaasadeed ee adiga ku saameynaya.
Diyaar garow wanaagsan iyo garyaqaan
Codsiga magangalyada soo noqnoqda waa in si sax ah loo diyaariyaa. Tusaale ahaan, dukumiintiyada taageeraya ee asalka ah waa in la soo gudbiyaa iyadoo ay la socdaan noocyo la turjumay. Markasta weydiiso qareen caawimaad. Waxaad ku soo gudbin kartaa dalabkaaga magangalyo ee soo noqnoqda Ter Apel. Ha u safrin Ter Apel ilaa aad ka buuxiso foomka dalabka oo aad haysato dukumiintiyada asalka ah iyo tarjumaadaha muhiimka ah.
Nasiib darrose, VluchtelingenWerk ee Ter Apel kuuma qabanqaabin karo garyaqaan adiga. Sidoo kale barnaamijka VluchtelingenWerk ee Ter Apel kaaama caawin karo inaad buuxiso foomka dalabka ee ku noqoshada dalabka magangalyada. Waxaad foomka ka heli doontaa websaydhka IND.
The Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waxay ka tirsan tahay Wasaaradda Cadaaladda iyo Amniga ee Nederland. IND ayaa baareysa inaad xaq u leedahay magangalyo Nederland oo ay go aansato in laguu ogolaado inaad Nederland joogtid.
Ku socota websaydtka IND
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ayaa mas'uul ka ah soo dhaweynta iyo taageerada magangalyo-doonka Nederland inta ay socoto howlaha magangalyada.
Ku socota websaaytka COA
Raad voor Rechtsbijstand (RvR) wuxuu hubiyaa inaad caawimaad ka hesho qareen haddii aadan adigu iska bixin karin.
Ku socota Raad voor websaydhka Rechtsbijstand
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) wuxuu qeyb ka yahay Wasaaradda Cadaaladda iyo Amniga ee Nederland. Haddii ay IND kuu diiddo magangelyo, DT&V ayaa kaa caawin doonta qabanqaabada ku noqoshada waddankaagii hooyo.
Ku socota websaydhka DT&V
Internationale Organisatie voor Migratie Nederland (IOM) ayaa kaa caawin karta hadaad rabto inaad Nederland iskaga tagto adoo raali ka ah.
Ku socota websaydhka IOM
Rode Kruis wuxuu caawiyaa helitaanka dadka maqan.
Ku socota bogga Rode Kruis
CoMensha (Gudiga ka ganacsiga dadka)
CoMensha waxaa ka go'an inay caawiso dhibbanayaasha iyo dhibbanayaasha tahriibinta dadka ee Nederland.
Ku socota websaydhka CoMensha
Waxaad ka yartahay da'da 18 mana lihid waalid ama dad kale oo si rasmi ah kuugu daryeela Nederland. Si kastaba ha noqotee, sida uu qabo sharciga Nederlandka, qof waa inuu si rasmi ah kuu daryeelaa. Tan waxaa loo yaqaan ilaalin. Hay'adda ka shaqeysa arrintan Nederland waxaa lagu magacaabaa Stichting Nidos.
Ku socota websaydhka NIDOS
Mashruuca Time4You Waxa uu diiradda saarayaa xoojinta iyo u doodista carruurta qaxootiga ah ee ku sugan xarunta soo dhaweynta.
Ku socota websaaytkaag Time4You
Dhammaan waraaqaha nidaamka magangelyada waxaa lagu heli karaa luqado kala duwan oo ku saabsan this page.